Politika sosialy sy fiahiana ara-tsosialy, fanombanana, sehatra tsy miankina | UNICEF Madagasikara
Politika sosialy sy fiahiana ara-tsosialy, fanombanana, sehatra tsy miankina
Manangona angon-drakitra mikasika ny reny sy ny zaza mba handraisana fanapahan-kevitra tsara kokoa, hanohanana ny fiahiana ara-tsosialy ary hampiroboroboana ny zon'ny ankizy eo amin'ny sehatra tsy miankina
Fampiasam-bolam-panjakana mitsinjo ny ankizy
Fiaraha-miombona antoky ny tsy miankina sy ny fanjakana
92 isan-jaton'ny mponina Malagasy no miaina ambanin'ny fetran’ny fahantrana, amin'ireo faritra ianjadian’ny haintany izay mahatratra 98 isan-jato.
Ho an'ireo ankizy 5-14 taona, 20% no voasokajy ho tena mahantra indrindra ary 20% ihany koa ireo manan-karena indrindra. Voatombana ho eo amin’ny avo efatra heny eo ho eo ny haavon’ny tahan'ny tsy fisitrahana fanabeazana eo amin’ireo ankizy mahandra indrindra (49 isan-jato no tsy mandia sekoly) raha oharina amin’ireo manan-karena indrindra
Maherin’ny 6 tapitrisa ny ankizivavy latsaky ny 18 taona no tsy afaka misitraka amin’ny tokony ho izy ireo tolotra sosialy tsara kalitao.
Tsy ampy ny tetibola voatokana ho an'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fanabeazana.
Tamin'ny taona 2017, ny teti-bola natokana ho an'ny Ministeran'ny Fahasalamana dia 6 isan-jaton'ny tetibolam-panjakana, ary ny fampianarana dia18 isan-jato.
Politika sosialy, volam-panjakana natokana ho an’ny ankizy
Ny UNICEF dia mikatsaka ny fisian'ny tetibola mangarahara, hahafahana mahita tsara ireo fitsinjarana sy fandaniana eo amin'ny sehatra ara-tsosialy sy ho an’ny ankizy, izay mifanaraka amin'ny tanjona napetraka eo amin'ireo sehatra samihafa, toy ny fahasalamana, fanabeazana, sakafo ara-pahasalamana, fiahiana ara-tsosialy , rano sy fanadiovana.
Ankoatry ny fanatanterahana ireo famakafakana isan-karazany mikasika ny tetibolan'ny sehatra ara-tsosialy, ny UNICEF dia miditra an-tsehatra ihany koa eo amin'ny fanatevenam-pahaizana ho an’ireo mpandray anjara fototra isankarazany mba hiantohana ny fandraisan’andraikitry ny fanjakana sy hamporisihana ny fampiasam-bola amin'ny sehatra sosialy.
Fiahiana ara-tsosialy infandrimbonana
Ny UNICEF dia niditra tamin’ny fananganana rafitra iray misahana ny fiahiana ara-tsosialy ifandrimbonana. Satria moa ny fiahiana ara-tsosialy dia singa iray manan-danja eo amin’ny paikady fampihenana ny fahantrana, dia hahafahana mampihena ny faharefoana eo amin’ny mponina izany.
Ny UNICEF dia manolotra fanohanana, indrindra ho an’ny famaritana ny rafitry ny lalàna mifehy, ny famolavolana sy fampiharana ny politikam-pirenana momba ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fanavaozana ny paikadim-pirenena mikasika ny fiahiana ara-tsosialy sy ny drafitr’asa mifanaraka amin’izany
Fikarohana, fandinihana ary fanombanana
Niditra an-tsehatra ny UNICEF mba hiantohana ny fahazoana angon-drakitra momba ny toe-javatra ara-ekonomika sy ny fiantraikany amin'ny reny sy ny zaza, ary hanombanana ny fampiharana ny programa isan-karazany. Izany no natao dia hahafahana mahazo fiantraikany tsara kokoa amin'ny lafin’ny politika sosialy sy ny teti-bola mifandraika amin’izany, ary manamafy ny fandaharana mifototra amin'ny porofo.
Ny famoronana angon-drakitra mikasika ny ankizy dia tafiditra tanteraka ao anatin’ny asa sahanin’ny UNICEF Madagascar. Nohamafisina manokana ny kalitaon'ny fandinihana izay mitarika fahatokisana amin'ny lafiny kalitao amin'ireo tetik’asa rehetra.
Fiaraha-miasa sy fandraisan’anjaran’ny sehatra tsy miankina
Tsapan’ny UNICEF ny anjara andraikitra lehibe sahanin’ny sehatra tsy miankina eo amin’ny fanatanterahana ny Tanjona ho amin’ny Fampandrosoana Maharitra (ODD). Miha-liana bebe kokoa hatrany amin’ny ODD tokoa mantsy ireo sehatra tsy miankina, ka mihoatra lavitra noho ireo fanekena tsotra momba ireo asa soa izany
Ny UNICEF dia niditra an-tsehatra mba hamporisihana ny sehatra tsy miankina, entina hampiroboroboana ny zon'ny zaza. Manomana hetsika miaraka amin’ny fiaraha-mientan’ny governemanta ihany koa ny UNICEF, mba hametrahana tontolo tsara ho an’ny fampiasam-bola, izay manaja ny zon'ny zaza.
Haka ilay tahirikevitra
Ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany sy ny zon’ny ankizy
Rehefa miady amin’ireo olana mianjady amin'ny ankizy ny orinasa dia mandray andraikitra lehibe amin'ny fiainana ankehitriny sy ny hoavin'ny ankizy
Fitaovana afaka ampiasain'ny orinasa handrefesana ny fiantraikan'ny fandraharahana ataony amin'ny fiainan'ny ankizy